'चेली, कृश्चियनको डलर खाएर वेदको व्याख्या गर्ने ?'
- नारायणी देवकाेटा
लेखको सुरुवातमा नै स्पष्ट गर्न चाहन्छु, समाजशास्त्र (जुन विषय मैले पढेँ र अहिले पढाइरहेकी छु) धर्म भन्ने कुरा मानिसले बनाएको हो भन्नेमा स्पष्ट छ र म त्यसलाई पछ्याउँछु । मानव समाज विकासका क्रममा मानिसले किन धर्महरूको विकास गर्‍यो ? किन कोही मानिस धार्मिक छन् वा मानिस किन धर्मको पछि लागिरहेका छन्, मानव समाजमा धर्मको आवश्यकता छ कि छैन ? छ भने किन छ भन्नेबारेमा समाजशास्त्रमा व्यापक छलफल हुन्छ ।
समाजशास्त्र विषय आफ्नै विकासको एउटा आधार धर्मको नेतृत्व नष्ट हुँदै गर्दाको संक्रमणकालीन समाज पनि हो । जब फ्रान्समा क्रान्ति भयो र भगवान्‌का अवतार भनिएका राजा, सम्राट र जारहरूको अन्त्यको सवाल युरोपभर फैलिँदा मानिसहरूलाई लाग्यो- यो सभ्यताको अन्त्य भयो, धर्मको नास अर्थात् बर्बाद भयो ।
त्यसै सन्दर्भमा धर्मको विकासका बारेमा बहस हुने क्रममा मानव समाज कुनै धर्मले निर्माण गरेको भन्दा पनि मानव समाजले आफ्नो विकास क्रममा आफ्ना आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न धर्मको विकास गर्‍याे भन्ने अवधारणा अगाडि सारियो । यसमा समाजशास्त्र विषयका सुरुवातका मुख्य दार्शनिकहरू (जसलाई फाउण्डिङ फादर पनि भन्ने गरिन्छ) ले धर्मका बारेमा आफ्ना अध्ययन, लेखन र व्याख्या गरे ।
धर्मको विकास मानिसले आफ्ना समस्याको सम्बोधन गर्ने क्रममा गरेको हो भन्ने कुरामा सहमत भए पनि । समाजमा भएका धेरै कुरामध्ये धर्मलाई कसरी हेर्ने भन्नेबारेमा पनि समाजशास्त्रमा फरक-फरक विचार वा मतहरू छन् । त्यसलाई सामान्यतया संरचनात्मक प्रकार्यवादी, मार्क्सवादी र महिलावादी दृष्टिकोणका मतलाई एकसाथ पढाइन्छ । जसलाई छोटोमा भन्दा संरचनात्मक प्रकार्यवादले धर्मले मानिसलाई समाजसँग जोड्छ, समाजमा भएका सम्बन्धहरूलाई अझ बल्लियो बनाउने काम गर्छ भन्ने तर्क अगाडि सार्छ । मार्क्सवादले धर्मले समाजमा रहेको विभेदप्रति विद्रोह गर्ने वर्गलाई विगत र भविष्य (पूर्वजन्म र अर्को जन्म) को कुरा गरेर मानिसलाई नसामा राख्छ भन्छ भने महिलावादीहरू यो पुरुषद्वारा, पुरुषको मुक्ति वा रक्षाका लागि पुरुषलाई गरिने सम्मान आराधनाको रूपमा लिइन्छ । उदाहरणका लागि क्रिश्चियानिटीमा जिजस क्राइस्ट, हिन्दुमा त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु र महादेव), मुस्लिममा मोहमद र बुद्ध धर्ममा गौतम बुद्धलाई भगवान्‌को रूपमा लिइन्छ, जो पुरुष हुन् ।
धर्म र धर्मको ज्ञान
महिला, जनजाति र दलितलाई वा सिमान्तकृतलाई दमन गर्ने, होच्याउने, हेजेमोनाइज गर्ने कुरा धार्मिक कर्मकाण्डमा भएको कुरा गर्दा क्रिश्चियनहरूको डलर खाएको, ग्रन्थमा गरिएको व्याख्याका बारेमा छलफल गर्दा ‘सम्पूर्ण वेद र पुराणहरू नपढी धर्मशास्त्रको व्याख्या गर्न मिल्दैन’ वा ‘केही सीमित किताब पढेको भरमा व्याख्या गर्न खोज्नु अन्धाले हात्ती छान्नुजस्तै हो’ जस्ता टिप्पणी सार्वजानिक भइरहन्छन् । लाग्छ, धर्मशास्त्रका ज्ञाताहरू ‘तैँले के जानेको छस् र ?’ भनेर सोध्छन् । ‘फलानो किताबको फलानो लाइनमा यस्तो लेखिएको छ’ भन्दा ‘उक्त अनुवाद गलत छ’ भनेर पनि भनिदिन्छन् ।
यहाँ जोड्न के जरुरी छ भने धर्म र दर्शनशास्त्रका किताबहरू इतिहासको लामो समयसम्म आममानिसको बोलीचालीको भाषामा थिएनन्, न त किताबहरू नै पर्याप्त थिए । भएका थोरै किताब पनि विशेष (पवित्र भनिने) लिपिमा लेखिएका हुन्थे । उदाहरणका लागि हिन्दु धर्मग्रन्थ संस्कृत, कृष्टियानिटीमा ल्याटिन, मुस्लिममा उर्दु र बुद्ध धर्मका ग्रन्थहरू पाली भाषा लेखिएका थिए । र, ती भाषाका लिपिलाई आम रूपमा पवित्र मानिन्थ्यो, जो आममानिसको पहुँचमा थिएनन् ।
समाजशास्त्री अर्नेष्ट गेल्नर आफ्नो किताब 'नेसन एण्ड नेसनालिज्म'मा लेख्छन्, ‘ग्रामीण कृषि समाजमा केही पढेलेखेका (दार्शनिक, पूजारी, वैद्य, सरकारी लगत राख्ने मान्छे) मानिस थिए । तिनीहरूले आफूलाई आमकिसानभन्दा भिन्न रूपमा प्रस्तुत गर्थे र किसानले पनि आफूलाई पढेलेखेका मानिसभन्दा भिन्न तरिकाले लिन्थे (गेल्नर १९८३) ।'
यसको उदाहरणको रूपमा हिन्दु समाजमा ऋषिहरूले मानव समाज टाढाभन्दा जंगलमा गएर तपस्या गर्ने र गुरुकुललाई चलाउने कुरालाई लिन सकिन्छ ।
ल्याटिन भाषाको सन्दर्भमा भाषाशास्त्री बेडिक एण्डरसनले आफ्नो किताब इम्याजिन कम्युनिटीमा लेखेका छन्, ‘पहिल्यै पनि ल्याटिन भाषा युरोपमा धेरै कम मानिसले पढ्थे र पढेका मध्ये अझै धेरै कमले मात्र त्यसलाई व्याख्या गर्थे । तर, बोलीचालीमा स्थान विशेषका भाषाहरू थिए । १६औँ शताब्दीमा आफ्ना-आफ्ना बोलीचालीका भाषामा किताबहरू लेखिन थाल्यो (एण्डरसन २००६) । ठ्याक्कै यही सन्दर्भ नेपाली भाषाको हकमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यले वाल्मीकि रामायण उल्था गरेपछि भएको हो भन्न सकिन्छ ।
धर्मशास्त्रका ग्रन्थहरूको सीमित पहुँचका कारण मानव इतिहासको लामो समयसम्म धर्म श्रुति र श्रवण परम्परामा टिकेको थियो भन्दा सायद अत्युक्ति नहोला । हाम्रै समाजमा केही पुस्ताअगाडिसम्म ठूलो विद्वान् भन्नुपर्दा काँसीमा रहेका गुरुकुलहरूमा गएर वेद पढेका मानिसहरू थिए । जसलाई संस्कृत भाषाका पण्डित भन्ने गरिन्थ्यो ।
यस्ता गुरुकुलमा जोकोहीलाई भर्ना लिइँदैन्थ्यो । र, वेद जाेकाेहीले पढ्न हुँदैन भन्ने सामाजिक मान्यता थियो । पढ्न चाहने वा बहसमा सहभागी हुन चाहने विशेष जातिका पुरुषहरूबाहेकलाई गरिने अपमान वा दण्डका कुराहरू धार्मिक कथाहरूमा यत्रतत्र पाउन सकिन्छ । यसको उदाहरणमा राजर्षि जनकको सभामा याज्ञवल्क्यले गार्गीलाई गरेको अपमान, एकलव्य धनुर्विद्यामा पाराङ्गत भएका कारण गुरुदक्षिणास्वरूप मानस गुरु द्राेणचार्यले एकलव्यको बूढीऔँला मागेको कुरालाई लिन सकिन्छ । जसले आमरूपमा महिला र कथित् तल्लो जातिका भनिएका मानिसलाई विद्या ग्रहण गर्न, ज्ञानका बारेमा बहस गर्नबाट तर्साएको स्पष्ट हुन्छ ।
धर्मलाई पढेलेखेका मानिसहरूले आफ्नो क्षमता, बुझाइ, स्वार्थ र सत्ताको सोचअनुसार धर्मशास्त्रको व्याख्या, अपव्याख्या या पुनः व्याख्या गरेका थिए भन्ने प्रशस्तै उदाहरण पाउन सकिन्छ । जसले गर्दा कतै धर्म दर्शनको रूपमा, कतै व्यवस्था (सिस्टम)को रूपमा फैलियो । जहाँ दर्शनको रूपमा फैलियो, त्यहाँ आममानिसमा कम दमन भयो भने जहाँ व्यवस्थाको रूपमा फैलियो, त्यहाँ बढी दमन भयो ।
साथै, एक धर्मको मानिसले अर्को धार्मिक समुदायका ग्रन्थ र शिक्षालय जलाउने र जबर्जस्ती आफ्नो धर्म मान्न लगाउनेसम्मका काम मानव समाजमा भए । यो कुरा हिन्दु धर्म वा कुनै एक धर्ममा मात्रै सीमित थिएन । क्रिश्चियानिटीमा मानव हत्यालाई पापको रूपमा व्याख्या गरेको हुँदा कैयौँ क्रिश्चियन पाश्चरहरूले आफ्ना कोलोनी फैलाएका समुदायका मानिसलाई जनावरको संज्ञा दिँदै मारे । आफ्नो धर्म लाद्ने क्रममा क्रिश्चियनहरूले स्थानीय औषधिमुलो जानेका महिलालाई बोक्सीको नाममा जिउँदै जलाउने काम गरे । शंकराचार्यहरूले कैयौँ बौद्ध धर्मका ग्रन्थहरू जलाएका कथा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ।
धर्म अन्धताको यो वेगले शासकहरूलाई आफ्ना नागरिक र महिलाहरू आफ्नाप्रति बफादार बनाउने र हराएका समुदायलाई आमरूपमा दास र केही महिलालाई यौनदासी बनाउने क्रम सुरु भयो । बिस्तारै महिलाको यौनिकलाई लिएर आफ्नो र परायाकरण गर्न थालियो । आफ्नो रगत, कुल वंशको गौरवगानको कुरालाई लिएर महिलाको यौनिकता, महिलाको कोखलाई पवित्र/अपवित्र मान्ने र बनाउने क्रमको सुरुवात भयो ।
हिन्दु धर्ममा महिलाको चित्रण
यहाँ आइसकेपछि यो लेख मुख्य गरी म जन्मे हुर्के र आफूले बाँचिआएको हिन्दु धर्ममा महिलालाई कसरी प्रस्तुत गरिएको छ भन्नेबारेमा केही लेख्न चाहन्छु । धार्मिक कर्मकाण्ड र कथाहरूमा केही समतामूलक र केही विभेदका कथाहरू एकसाथ छन् । यी दुवैलाई दुवै पक्षका बहसमा राख्ने गरिन्छ । उदाहरणका लागि हिन्दु समाजमा भइरहने पुण्यकर्ममा पञ्चकन्याको पूजा गरिन्छ । सामान्यतया पञ्चकन्याका प्रतिरूप मानेर साना बालिकाहरूको पूजा गरे पनि खासमा पञ्चकन्या भनेर पूजा गरिने महिलाहरू महाभारत र रामायणका शक्तिशाली महिलाहरू (अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुन्ती र मन्दाेदरी) हुन्, जसले परपुरुषसँग गरेको सम्भोगलाई स्वीकारेका हुन्छन् ।
पञ्चकन्याको कुरा आउँदा जहिले पनि मेरो मनमा रामायणकी पात्र सीता, महाभारतकी पात्र सत्यवती र श्रीस्वस्थानीकी पात्र वृन्दालाई किन कन्याहरूमा सामेल नगरेका होलान् भन्ने लागिरहन्छ । योबारेमा कुरा हुँदा अगाडि सारिने एक तर्क हो- ‘जसले आफ्नो यौनजीवनलाई लुकाएनन् वा यौनसम्बन्ध एकभन्दा बढी मानिससँग हुने कुरालाई स्वीकार गरे (चाहे रहरमा होस्, चाहे बाध्यतामा), उनीहरूलाई कन्याको रूपमा पुजिन थाल्यो । तर, जसले यौनजीवनलाई सामान्य रूपमा लिएनन् वा पवित्रताको रूपमा लिए, तिनीहरूलाई कन्यामा सामेल गरिएन ।'
सीताले त आफूलाई रावणले हरण गरेको भए पनि यौनिक पवित्रता अर्थात् पतिव्रत धर्म नतोडिएको भनेर रामले लिएको अग्नि परीक्षा पनि दिइन् । सत्यवतीले ऋषि परासरसँगको आफ्नो सम्बन्ध र छोरा वेदव्यासलाई सार्वजानिक रूपमा कहिल्यै स्वीकार गरिनन् । पञ्चकन्याको यो तर्कले महिलाको यौन स्वतन्त्रतालाई हिन्दुधर्म परम्परामा स्वीकार गर्छ भनेर मान्न सकिन्छ ।
अर्को आमरूपमा नेपालमा हिन्दुहरूले पूजा गर्ने शिवरात्रि, स्वस्थानी व्रत वा कथा र तीजका व्रतमा हिमालय पर्वतकी छोरी पार्वतीले महादेव श्रीमान् पाउनका लागि गरेको तपस्या र महादेवसँगको उनको विवाहको कथा सुनाउने गरिन्छ । जहाँ महादेवको कुनै जात, गोत्र नभएको प्रसंगले महिलाले कोसँग विवाह गर्ने भन्नेमा परिवार र समाजको खास दबाब नभएका कुरा मान्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी, विजया दशमीमा पूजा गरिने नवदुर्गाहरूका कथाले पनि महिला आफ्नो हितरक्षाका लागि आफैँ सक्षम हुन्छन् भन्ने कुरालाई देखाउँछ भने कृष्णअष्टमीमा पूजा गरिने राधाकृष्ण र सुनाइने उनका कथाहरूले किशोरकिशोरीको बीचमा हुने प्रेमलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको पनि पाउन सकिन्छ ।
तर, कथाका सबै भाग उस्तै छैनन् । पञ्चकन्याका रूपमा पूजा गरिने महिलालाई स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा उनीहरूको निर्णयले प्राथमिता पाएको देखिँदैन, न त पञ्चकन्यामा नपरेका तर धार्मिक कथाका प्रभावशाली पात्रहरूलाई नै त्यस प्रकारको स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । महाभारतका सत्यवती र कुन्तीले विवाहभन्दा अगाडि जन्माएका छोराहरूलाई गरेको त्यागबाट, यौन र सन्तान उत्पादनका लागि पुरुष अर्थात् श्रीमान्‌को उपस्थितिलाई अनिवार्य गरेको छ, अर्थात् स्वतन्त्र मातृत्वबाट विमुख गराएको छ ।
त्यसैगरी, सीताको पवित्रताको कुरालाई लिएर रामले उनको अग्निपरीक्षा मात्रै लिएनन्, श्रीमान्‌को आवश्यकता पर्ने गर्भवती भएको समयमा जंगलमा लगेरसमेत छोडिदिन्छन् । त्यसैगरी, अहिल्यालाई छक्याएर सम्भोग गर्ने ईन्द्रलाई श्राप दिए पनि गौतम ऋषिले आफ्नी पत्नीलाई ढुंगा बनाएँ । स्वस्थानी कथामा जालन्धरलाई मार्नका लागि वृन्दालाई छल गरेर घाँस, झार, रुख र ढुंगा हुने श्राप पाएका भए पनि भगवान् विष्णुको पूजामा समाजले कुनै कमी गरेको छैन । बरु, औषधिजन्य वनस्पतिमा बास गराएर झन् महत्त्व प्रदान गरेको छ । यी महिलाका कथाबाट के भन्न सकिन्छ भने महिलाको यौनिक पवित्रता बचाउनु महत्त्वपूर्ण हो र त्यसलाई महिलाले नै बचाउनुपर्दछ । नबचाएमा दोषको भागीदार पनि महिला नै हुनुपर्छ ।
महिलालाई उसको यौनिकता र स्वतन्त्र मातृत्वबाट बेदख्खल गरिएसँगै विभिन्न महात्म्य वा कथाहरूमा महिलालाई पुरुषकी अधीनस्थ व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसको सबैभन्दा कुरुष चित्रण हरेक वर्ष भनिने माघ महात्म्य (स्वस्थानी कथामा) वा मलमास परेको वर्ष सुनाइने पुरुषोत्तम मास महात्म्यका कथामा श्रीमान्‌लाई सम्मान गर्नुपर्ने र नगर्दा पापको भागीदार बन्नुपर्ने कथाहरू छन् ।
तेस्रो, यी धर्मग्रन्थहरू महिलाका भन्दा पनि पुरुषका वीरता र पुरुषलाई सर्वाेच्च बनाउने सोचका कथाहरू हुन् । रामायणमा रामको, महाभारतमा कृष्ण र पाण्डवहरूको अनि स्वस्थानीमा महादेवका वीरताका कथाहरू छन् । रमाइलो त के छ भने स्वस्थानीको व्रत वा कथा झट्ट सुन्दा देवीको कथा र व्रत भनिन्छ । तर, त्यहाँ न कतै स्वस्थानी नामकी देवीको कथा छ, न स्वस्थानीको पूजा नै गरिन्छ ।
हिन्दु धर्मका कारण नेपाली महिलाको जीवनमा परेको प्रभाव
हिन्दु कर्मकाण्डमा ‘जसरी आगोले पोल्छ भन्ने थाहा पाउनेलाई पनि पोल्छ, पोल्छ भनेर थाहा नपाउनेलाई पनि आगोले पोल्छ’ भनेर पटक-पटक सुनाइन्छ । यसलाई ‘आममानिसको जीवनका कैयौँ परिघटनाले थाहा पाए पनि नपाए पनि वा थाहा पाएर उक्त परिघटनालाई नस्वीकारे पनि प्रभावित बनाइरहन्छन्’ भनेर भन्न सकिन्छ ।
हिन्दु धार्मिक समाजमा आमरूपमा वृद्ध अवस्थामा स्याहार गर्ने, वंशको निरन्तरता दिने, सम्पत्तिको उत्तराधिकारी हुने र मरेपछि क्रियाकर्म गर्नुपर्ने, वार्षिक पुण्यतिथिमा श्राद्ध गर्ने काम छोराले नै गर्नुपर्ने भन्ने मान्यता छ । हुन त ‘छोरी, शिष्य, पत्नी आदिले पनि दागबत्ती दिन हुने र तिनले पनि यथायोग्य मुण्डन, स्नान र प्राय:श्चित गरी शवदाह, प्रेतपिण्ड दिन हुने’ अभिव्यक्ति संस्कृत भाषाका पण्डितहरूले बेलाबेला दिन्छन् (पन्त, रामेश्वरी २०७२) । तर, त्यो स्वर समाजमा झिनो छ ।
आममानिस धर्मशास्त्रभित्रका यस्ता विवाद वा बहसमा जानकार हुँदैनन् । मानिसले देखी, सुनी र भोगी आएको चालचलनले गर्दा समाजमा छोरालाई प्राथमिकता दिइन्छ । र, छोरालाई प्राथमिकतामा राख्नेमा शिशुका पितापट्टिको लाइनका मानिस मात्रै पर्दैनन् । मातापट्टिका लाइनका मानिसहरू पनि पर्दछन् । हिन्दुधर्मका धेरै कर्मकाण्डहरू वा धार्मिक कार्यहरू भान्जाबिना अधुरो मानिने हुँदा छोरीको सन्तान हुँदा छोरीभन्दा छोरा होस् भन्ने सोच धेरैमा रहेकाे पाइन्छ । यसरी छोरीलाई भन्दा छोराको जीवनलाई प्राथमिकतामा राख्ने वा बढी मूल्य प्रदान गर्ने कुराले एक महिलाको जिन्दगीमा पर्ने असर भ्रूणको लिंग पहिचानदेखि श्राद्धसम्म परेको पाइन्छ ।
नेपालमा मानव भ्रूणको लिंग पहिचान गरी गरिने गर्भपतन पछिल्ला दिनमा बढ्दो छ । यसले जनसंख्याकै तहमा पारेको प्रभाव सायद सन् २०२१ मा हुने जनगणनाको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि भन्न सकिएला । तर, फाट्टफुट्ट अनुसन्धान भने भइरहेका छन् । काठमाडौंको कागेश्वरी नगरपालिकामा गरिएको एक अध्ययनले महिलाको संख्या ३ हजारले घटेको देखाएको छ । र, यसरी घट्नुमा लिंग पहिचान गरी गरिने गर्भपतन नै प्रमुख कारण भएको निष्कर्ष नगरपालिकाले निकालेको उपप्रमुख बिन्दु पुडासैनी सिम्खडाले एक अन्तर्वार्ताका क्रममा बताउनुभएको छ ।
गर्भमा भ्रूणको पहिचान गरेर गर्भपतन गर्ने कुराबाट उठेर जन्मेका शिशुहरूको कुरा गर्ने हो भने धेरै परिवारमा छोरी जन्मेकोमा भन्दा छोरा जन्मेकोमा खुसियाली मनाउने गरिन्छ । छैटी, नामकरण वा पास्नीमा गरिने भोजमा नै फरक व्यवहार हुन्छ ।
शिक्षा दिने कुरामा पनि बालकहरूले भन्दा बालिकाहरूले कम प्राथमिकता पाउँछन् । यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण अहिलेको कोभिडको समयमा बालिकाहरूलाई विद्यालयबाट निकालिने कुरासँग जोड्न सकिन्छ । कोभिडअगाडि छोरालाई महँगा निजी विद्यालय र छोरीलाई कम खर्च लाग्ने सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने वा छोरालाई शहरका निजी विद्यालयमा राख्ने र छोरीलाई गाउँका कम खर्च लाग्ने निजी विद्यालयमा पढाउने कुरालाई लिन सकिन्छ ।
किशोरी अवस्थाको सुरुवातसँगै हुने महिनावारीको पवित्रताको कुरालाई लिएर अहिले पनि धेरै किशोरीहरूले विद्यालय छोड्छन्, छाउगोठमा बस्न वा नजिकैका आफन्तको घरमा बस्न बाध्य छन् । जसले महिलाको प्राकृतिक मासिकचक्रलाई अपवित्र घोषणा गर्दछ । पछिल्लो समयमा महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन विभिन्न प्रकारका अभियान संचालनमा छन् । तर, महिनावारीलाई पाप भनेर पाप कटाउन गरिने ऋषि पञ्चमीको कथा पनि समानान्तर रूपमा निरन्तर छ ।
आमहिन्दु महिलाका लागि विवाहको दिन खुसीको दिन हुँदैन । एक त जन्मदादेखि गरिँदै आएका विभेदहरूको उक्त दिन पटाक्षेप हुन्छ, आफू जन्मेको हुर्किएको, आफ्नो श्रम र पसिना परेको उक्त घर आफ्नो होइन भन्ने कुराले । त्यसमाथि उक्त दिनमा महिलाको जिउँदै श्राद्ध गरेर गोत्र सारिन्छ, अनि वस्तुको रूपमा कन्यादान गरिन्छ । बिहेको भोजमा रमाइरहेकाहरू कमैलाई विवाह भएकी युवतीलाई पर्ने मानसिक आघातको कमै महसुस हुन्छ । महसुस गर्नेहरूले पनि, ‘के गर्ने त छोरीको जन्म हारेको कर्म’ वा ‘महिलाको त भाग्य नै अरुको घरमा जाने’ भनेर सम्झाउँछन् ।
विवाहपछिको घर जति नै उसको हाे भने पनि उसको होइन भन्ने महसुस बेलाबेलामा गराइन्छ । यसरी महसुस गराइने कैयौँ घरमा उसलाई घरभित्रको आज्ञाकारी मजदुर र तल्लो दर्जा दिने काम, कर्तव्य र कथाका फेहरिस्तहरू प्रशस्तै हुन्छन् । आज्ञाकारी हुन मञ्जुर नगरेका धेरै महिलामाथि हुने बर्बर हिंसाका ग्राफलाई सरकारी निकायले नै हरेक वर्ष २५ नोभेम्बरमा सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
विवाहपछि छोरा जन्माउन नसके ऊमाथि अर्को बुहार्तन थपिन्छ । परिवार नियोजनको पहुँच पुगेका घरपरिवारमा समेत छोराको प्रतीक्षामा सुत्केरी भइरहनुपरिरहेको हुन्छ भने कैयौँले गर्भपतन गराइरहनुपरेको हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरूमा शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा नकारात्मक असर परिरहेको हुन्छ । कैयाैँ परिवारमा छोराको कारणले सन्तान नभएको कुरालाई स्वीकार नै गरिँदैन, छोराको कारण सन्तान नभएको थाहा भएमा अरु तरिकाले पनि सन्तान उत्पादन गर्न लगाइने कुरा मानोचिकित्सक डा. विश्वबन्धु शर्माले गत वर्ष सार्वजनिक किताब 'मान्छेको मन'मा उल्लेख गरेका छन् । यसको जरो वा चुरो कुरा पनि बुढेसकालमा पाल्ने र मरेपछिको क्रियाकर्म छोराले गर्ने भन्ने धार्मिक मान्यतामा आधारित छन् ।
विवाहित महिलामा हुने विभेदको सिलसिला श्रीमान्‌/श्रीमतीमध्ये कुनै एकको मृत्युपछि अझ बढी हुन्छ । कलिलो उमेरमा नै श्रीमान् गुमाउन परेका महिलाहरूमाथि श्रीमान्‌को मृत्युको पीडा त हुन्छ नै । त्यसमाथि पूर्वजन्मको पाप, अलक्षिण वा टोकुवा र पवित्रताका लागि सादा जिन्दगी बिताउन धार्मिक आग्रह थपिन्छ । तर, महिलाको मृत्यु हुँदा वातावरण अर्कै हुन्छ । पहिलो त श्रीमतीको मृत्युमा श्रीमान्‌हरूले क्रियाकर्म पनि अपवादबाहेक गर्दैनन् ।
दोस्रो, धार्मिक परम्पराअनुसार ऊ महिलाजस्तो बैधव्य अर्थात् एकल जीवन बिताउन बाध्य हुँदैन । विभेदको सिलसिला महिलाहरूको मृत्युपछि पनि रहन्छ । साेह्रश्राद्ध गर्दा आमाको तिथि अगाडि भए पनि बुबाको तिथिमा आमाको श्राद्ध गर्ने गरिन्छ ।
माथि उल्लेख गरेको एक हिन्दु महिलाको जिन्दगीमा उसले भोगेका विभेदका शृंखलाहरू हिन्दु धर्म संस्कारमा छोरा वा भान्जा र छोरी वा भान्जीलाई एकै मान्यता भएका भए यस्ता विभेदहरू महिलाले कमै भोग्न पर्थ्याे होला भन्न सकिन्छ ।
हिन्दु महिलाको सन्दर्भ मात्र हो यो कि गैर हिन्दुमा पनि छ ?
परिवार र समाजबाट राष्ट्रको तहमा पुगेर हेर्दा वर्तमान नेपालको जग नै असली हिन्दुस्तान बनाउने उद्देश्यका साथ भएको थियो भन्ने कुरालाई यहाँ जोड्न जरुरी छ । राजा पृथ्वीनारायण शाहले असली हिन्दुस्तानको जग हालेपछि जोजो शासक प्रभावशाली रूपमा आए, उनीहरूले हिन्दु धर्मलाई सत्ता संचालनको एक हतियार बनाएका छन् । चाहे त्यो जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन होस्, चाहे राजा महेन्द्रको पञ्चायत होस् वा वर्तमानमा भइरहेका मन्दिर निर्माणको तीव्रता होस् । संसारभरि नै धर्म सत्ता संचालक वर्गको वैचारिक हतियारमध्ये एक हो र आफ्ना जनता विद्रोही नहाेऊन् भन्ने आधारभूत मान्यता राखेर धर्मलाई बढावा दिइन्छ । यहीँनिर माथि उल्लेख गरिएको ‘परिघटनालाई स्वीकार नगर्ने मानिस वा समुदायलाई पनि यसले प्रभाव पार्दछ’ भन्ने कुरा जोड्न चाहन्छु ।
हिन्दु धर्म नमान्दैमा वा त्यसका बारेमा नजान्दैमा आममानिसको जीवन धार्मिक सत्ताको असरबाट मुक्त छैनन् । उदाहरणका लागि नेपाली समाजमा जनजातीय महिलाहरूको अवस्था हिन्दु धर्म मान्ने समाजका महिलाहरूको भन्दा उच्च रहेको वा महिला र पुरुष बीचमा विभेद नभएको जस्ता कुराहरू गरिन्छ ।
त्यसैगरी, हिन्दु धर्ममा दलितलाई चरम विभेद भएको भनेर पछिल्ला वर्ष सीमान्त समुदायका मानिसहरू क्रिश्चियन बन्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर, नेपालको पहिलो कानुन मुलुकी ऐन मूलत: हिन्दुधर्ममा आधारित थियो । अहिले आएर मानवअधिकारका विभिन्न सन्धि-सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा सरकारले मूलतः विभेदकारी कानुन बनाउन सक्दैन । तर, उसको कोसिस निरन्तर छ भन्ने कुरा प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमा झल्कन्छ । नागरिकताको सवालमा पितालाई दिइएको प्राथमिकताले कुनै पनि जनजाति महिलाले आफ्नो बच्चा कुन पुरुषको वीर्यको हो भनेर नभन्दासम्म उक्त सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता नपाउने अवस्था यथावत छ ।
त्यसो त धर्मका जरा देशका कानुनमा मात्रै छैनन्, क्रान्तिकारी राजनीति गर्ने वा अधिकारका वकालत गर्ने र अधिकारमुखी संस्था संचालन गर्ने मानिसका सोचमा पनि छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा २०५० सालको दशकमा महिलामाथि हुने हिंसाको मुख्य कारण स्थानीय रूपमा पारिने जाँड-रक्सी भएको निष्कर्ष तत्कालीन महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गरेका धेरै संघसस्था, प्रहरी र विद्रोही माओवादीले एकसाथ निकालेका थिए । र, स्थानीय रूपमा गरिब, सिमान्तकृत र धेरै हदसम्म एकल महिलाले दु:खले जोडेका रक्सी बनाउने भाँडाकुँडा फुटाइदिने एउटै अभियान फरक-फरक तरिकाले संचालन गरेका थिए ।
वैचारिक रूपमा निकालिएको उक्त निष्कर्ष र क्रियाकलापले महिलामाथि हुने हिंसा घट्नेभन्दा पनि स्थानीय स्रोत साधनमा सञ्चालन भएका घरेलु रक्सी उत्पादन गर्ने सिलसिला बन्द भए र ब्राण्डेड रक्सीले घरेलु रक्सीकाे स्थान लिए । सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गरेर वा साँझ बिहान रक्सी पारेर आफ्नो खुट्टामा उभिँदै गरेका महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरण ठप्प भयाे । त्यसैले म यो धर्म मान्दिनँ भन्दैमा कोही धार्मिक सत्ताकाे प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छन् भन्ने हुँदैन ।
यसलाई हटाउन के गर्नुपर्ला ?
धर्मका कारण मानिसहरूमा भइरहेको दमन हटाउन के गर्नुपर्ला भन्ने प्रश्न नेपालमा महिला अधिकारका परियोजना र आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी छलफल भएको र ठ्याक्कै निष्कर्ष ननिकालिएको प्रश्न हो । धेरै मानिसहरू लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई यसको पूर्वसर्तको रूपमा लिन्छन् । यसरी लिनुको कारण मानिसले आफूलाई असहज लागेको कुरा लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्न सक्छन् भन्ने हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा महिनावारीलाई प्राकृतिक प्रक्रिया मान्ने, महिलाहरूका पुन: विवाह, छोरीले आफ्ना बुबाआमाको क्रियाकर्म गर्ने काम, सिमान्तकृत समुदायका मानिसले पनि धार्मिक ग्रन्थ पढ्ने र कर्मकाण्ड गर्ने गराउने, विवाहमा कन्यादानको भाग हटाउने कार्यहरू हुन थालेका छन् । यसरी भइरहेका परिवर्तन कतै सहज रूपमा, कतै बलपूर्वक र कतै सर्वस्वीकार्य नभए पनि चित्त दुखाउँदै अगाडि बढिरहेका छन् । यसको एउटा आधार शासनसत्ता लोकतान्तिक भएका कारण हो भन्न सकिन्छ ।
तर, शासनसत्ताको नीति नियमले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्दैन । कार्यान्वयनको तहमा पुगेर व्यक्तिगत जीवनका दैनिक व्यवहारमा देखिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हरेक एक व्यक्तिले आफूलाई असहज लागेका कुरामा बोल्न सक्ने वातावरण घर, परिवार र समाजमा हुन जरुरी हुन्छ । कैयाैँ पटक धर्मका नाममा हुने विभेदका कुरालाई लिएर समाज नै एकातर्फ हुने जस्ता घटनाहरू भइरहेका हुन्छन् । र, ती नितान्त धार्मिक ग्रन्धभन्दा पनि धार्मिक रूपमा सुन्दै आएका कथा कहानीमा आधारित हुन्छन् । उदाहरणका लागि यही वर्ष पोखराको एक क्रियापुत्री भवनमा दलितलाई बस्न दिइएन । त्यसैगरी एक संस्कृत पाठशालामा दलित विद्यार्थीलाई राख्न दिइएन । यस्ता घटना हुँदाका बखत धर्मशास्त्रका ज्ञाताहरूले यस्ता कुरा सही या गलत भनेर भनिदिने हिम्मत गर्नुपर्‍यो । 'समाज नै यस्तै' वा 'चलन नै यस्तै' भनेर पन्छिनु भएन ।
पहिलो कुरा धर्म आदिकालदेखि चलिआएको वा धर्मले मानिस बनाएको होइन । बरु, मानिसले आफ्ना आवश्यकता, राजनीति, कुण्ठा, असफलता र त्रासबाट बच्न बनाएको काल्पनिक कुरा हो । त्यसको निर्माण नै दु:खलाई भुलेर मुक्तिमा रमाउने भन्ने हुन्छ ।
कसैले त्यसलाई अफिम भन्लान्, कसैले त्यसलाई इन्नर ह्याप्पिनेस वा माइन्डफुलनेस भन्लान् वा मुक्तिमार्ग नै किन नहोस् । कुनै पनि धर्मले समाजमा भएको शोषणका विरुद्ध विद्रोहको कुरा गर्दैन, बरु ‘मेरो भाग्य नै यस्तै रहेछ’ भनेर पलायन हुने कुरा गर्छ वा जस्तोसुकै अवस्थामा खुसी हुनका लागि जोड दिन्छ ।
दोस्रो, कुनै धर्ममा भएका हानिकारक परम्पराको विरोध गरेको कुराले अर्को धर्म मान्नुपर्छ, अर्को धर्मको फैलावट होस् भन्ने उद्देश्य राखिएको पनि हुँदैन । र, यो लेख पनि यो धर्म राम्रो वा त्यो धर्म नराम्रोभन्दा पनि समग्रमा धर्मले महिलाको जीवनमा पारेको प्रभावको छोटो समीक्षा मात्रै हो । उदाहरणको रूपमा हिन्दु धर्मको सन्दर्भ बढी आउनु लेखक आफैँ उक्त धर्म समुदायको एक सदस्य भएका कारण मात्रै हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १०, २०७७, १२:४९:००